Fanehoan-javatra mifetra sy tsy mifetra - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fanehoan-javatra mifetra)
Ny fanehoan-javatra mifetra sy ny fanehoan-javatra tsy mifetra dia fanehoan-javatra ara-keviteny izay maneho fa ny fahafahan'ilay asa na toetra misy dia voafetra na tsy voafetra ara-potoana. Ny famerana dia efa ao amin'ny matoanteny na teny hafa atao lohatarika na ny teny atao fameno ao amin'ny tarika na atao lazaina na fameno ao amin'ny fehezanteny. Ao amin'ireo fitsipiteny mahazatra momba ny fiteny slava (isan'izany ny fiteny rosiana) dia ny matoanteny no manana ireo fanehoan-javatra roa ireo ka amin'ny alalan'ny tsirinteny fampisampanan-teny no isehoan'izany.
1.1 Fanehoan-javatra mifetra
1.2 Fanehoan-javatra tsy mifetra
2 Fifangaroana voambolana ao amin'ny fitsipiteny sy haiteny
3 Ny fanehoan-javatra ao amin'ireo fiteny slava
3.1 Fanehoan-javatra ao amin'ny fiteny rosiana
Ny fanehoan-javatra mifetra dia manambara asa na toetra izay tsy azo lazaina fa mitranga tokoa raha tsy tanteraka hatramin'ny fiafarany. Ny matoanteny hoe teraka dia matoateny mifetra.
Ohatra: Ireto misy matoanteny malagasy manana fanehoan-javatra mifetra:
Tonga, miditra, mivoaka, manjary, mitranga, foy, miainga, latsaka, teraka, mahatratra (vs manatratra), mandray, mahatsikaritra, manaikitra, manao teli-moka, manapika, mandrovitra, manidy, mandrehitra, manjavona, mihoatra.
Fanehoan-javatra tsy mifetraHanova
Ny fanehoan-javatra tsy mifetra kosa dia manambara asa na toetra izay azo lazaina fa mitranga tokoa na dia vao manomboka fotsiny aza sady azo tohizina maharitra araka izay itiavana azy.
Ohatra: Ireto misy matoanteny malagasy manana fanehoan-javatra tsy mifetra:
Mihira, miala aina, mitady, mandehandeha, mihinana, miaina, matory, miteny, mijery, mikiky, mahafantatra, mianatra, milentika.
Fifangaroana voambolana ao amin'ny fitsipiteny sy haitenyHanova
Mety hilazana ny toetra ara-panehoan-javatry ny filazam-potoana koa ny hoe mifetra sy tsy mifetra. Ny hoe mifetra dia mety hilazana ireo filazam-potoana misy fanehoan-javatra efa na mifintina. Ny hoe tsy mifetra kosa dia mety anondroana ireo filazam-potoana misy fanehoan-javatra tsy efa na/sy mivelatra. Ao amin'ny fiteny frantsay, ao amin'ny filaza tsotra (français: indicatif) dia mety hatao hoe filazam-potoana efa na mifintina na mifetra ny passé composé, ny passé simple, ny passé antérieur, ny plus-que-parfait, ny conditionnel passé ary ny futur antérieur; mety hatao hoe filazam-potoana tsy efa na mivelatra na tsy mifetra ny imparfait (ary indraindray koa ny présent).
Ny fanehoan-javatra ao amin'ireo fiteny slavaHanova
Ao amin'ny fiteny slava hafa, dia mizara ho mifetra sy tsy mifetra ny matoanteny na dia mbola ao amin'ny sehatry ny voambolana aza izy ireo, izany hoe mbola tsy iharan'ny fiovan'endrika noho ny filaza na/sy filazam-potoana aza.
Fanehoan-javatra ao amin'ny fiteny rosianaHanova
Ao amin'ny fiteny rosiana, ny matoanteny tsy mifetra dia manambara fa tsy vita na mitohy na miverimberina ny asa. Ny matoanteny mifetra kosa dia manambara fa vita ka mamela vokatra na miseho indray mandeha ny asa. Amin'ny fiteny rosiana, ny fanehoan-javatra mifetra dia atao hoe cовершенный вид / soberšenn'i vid fa ny fanehoan-javatra tsy mifetra kosa dia atao hoe неcовершенный вид / nesoberšenn'i vid.
Ireto misy ohatra amin'ny matoanteny tsy mifetra ampifanoherina (vs) amin'ny matoanteny mifetra ao amin'ny fiteny rosiana.
читать [čitat'] ("mamaky") vs протать [pročitat'] ("mahavita vaky")
писáть [pisát'] ("manoratra") vs написáть [napisát'] ("mahavita soratra")
строить [stroit'] ("manamboatra") vs построить [postroit'] ("mahavita voatra")
идти [idti] ("mandeha") vs пойти [poiti] ("miainga")
прыгать [prigat´] ("mitsambikina", tsy voafetra isa) vs прыгнуть [prignut´] ("mitsambikina indray mandeha").
покупáть [pakupát'] vs купить [kupít'] ("mividy")
съедáть [s'edat'] vs съесть [s'est'] ("mihinana")
убегáть [ubegat'] vs убежать [ubižat'] ("mihazakazaka")
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanehoan-javatra_mifetra_sy_tsy_mifetra&oldid=970832"
Dernière modification le 17 Mey 2019, à 00:45
Voaova farany tamin'ny 17 Mey 2019 amin'ny 00:45 ity pejy ity.